Isikhokelo esicwangcisiweyo kwi-Testosterone propionate powder ukusuka | AASraw
/Blog/Testosterone propionate/Isikhokelo esicwangcisiweyo kwiTestosterone propionate powder evela
ezaposwa ngomhla 01 / 23 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Testosterone propionate.
1.Yintoni i-testosterone propionate powder? I-2.Yintoni umjikelezo weprotectate we Testosterone?
3.Ungayifaka njani i-Testosterone Propionate? 4.Ungayifaka njani i-Testosterone Propionate?
5.Iziphumo ze-Testosterone Propionate powder (ezifunwa) 6. Imiphumo ye-Testosterone Propionate powder (kunye nendlela yokujongana nayo)
7.Isiqhelo se Testosterone Propionate powder 8.Buy Testosterone Propionate powder online
1.Yintoni i-testosterone propionate powder?
I-Testosterone propionate powder inefuthe elithile le-androgenic: likhuthaza ukuphuhliswa kunye nomsebenzi we-genitalia yangaphandle, i-prostate, i-vesicle vesicles, kunye neempawu zesini zesini kumadoda (ilizwi, iinwele). Ithatha inxaxheba ekubunjweni komgaqo-siseko kunye nokuziphatha ngokwesini kumadoda, ivuselela i-libido kunye ne-potency, kwaye ivuselele i-spermatogenesis. Iyanciphisa ukuveliswa kwe-hormone ye-luteotrophic and follicle stimulating.
I-Testosterone ingumchasi we-sex hormone-estrogen, inefuthe lokuxhatshazwa kwimizimba yeentombi kwiibhinqa. Inemiphumo ye-anabolic, okubangele ukuvuselelwa kweprotein ye-protein, ukunciphisa ukutshala kweoli, ukugcina izinto eziyimfuneko zokuveliswa kweprotheni, i-potassium, i-phosphorus, isulfure, ukuqiniswa kwe-calcium emathanjeni kunye nokwanda komzimba. Ukutya okunokwaneleyo kwiprotheni kukukhuthaza ukuveliswa kwe-erythropoietin.
I-2.Yintoni umjikelezo weprotectate we Testosterone?
Umjikelezo we-Testosterone propionate umiselwe kwi-hypogonadism eprayimari nesekondari, i-eunuchoidism; ukungasebenzi kwemvelo ye-endocrine, i-post-castration syndrome, ukunyuka komntu wesilisa; ukungabi nantlungu ngenxa yokuphulwa kwe-spermatogenesis; i-osteoporosis ebangelwa ukungabikho kwe-androgens, i-acromegaly, izigaba zokuqala ze-prostatic hypertrophy. Izifo ezixhomekeke kwiHormone kubasetyhini (isifuba, i-ovarian), ukuphazamiseka kwamadoda kwintombi (kunye ne-estrogens); ukuphuma kwegazi kunye ne-hyperestrogenism; i-mastitis, ehamba noxinzelelo olubuhlungu lwengxubevange yezilwanyana ezincinci; i-endometriosis, i-uterine fibroids zezizathu benzisa umjikelezo we testosterone propionate. Ipropionate isetyenziswe ekwenzeni unyango lwe-anemia kumadoda nakwabasetyhini ngokungahambi kakuhle kweyonyango (njengendlela yokwenza unyango lwe-causal).
Njengoko i-antbolicone propionate i-antbolicone propionate isetyenziselwa kwiimeko ezahlukahlukeneyo zempilo ezihamba kunye nokuxutywa kwamaprotheni (izifo ezingapheliyo, ukuxhala, ukuhlinzwa, ukulimala, ikakhulukazi amadoda).
Ipropionate iya kwi-50 okanye i-testosterone propionate i-100 mg nge-1 ml, efanelekileyo kwaye iphelele kubo bobabini nabafundi. Kwabaqalayo kuyacetyiswa i-50 mg zonke iintsuku, ngenxa yesova-testosterone propionate 100 mg / ml. Ikhosi ifuna ukuthatha ama-anti-estrogens ngokubhekiselele kwizicwangciso eziqhelekileyo ukukhusela i-gynecomastia, ukugcinwa kwamanzi kunye nezinye iziphumo ze-estrogenic. Emva kokugqiba ikhosi kufuneka uthabathe unyango lwe-post-cycle. Kukwacetyiswa ukuba uthathe i-cortisol blockers (whey protein okanye i-amino acid, i-omega-3, i-ascorbic acid, njl.) Ekupheleni komjikelo ukwenzela ukugcina ubunzima.
3.Usebenzisa njani i-Testosterone Propionate powder?
Eyona ndawo iqhelekileyo i-Testosterone Propionate Ngu:
50 kwi-100mg imihla ngemihla
50 ukuya kwi-100mg yonke imihla ye-2nd
Yonke imihla ka-3rd kufuneka ibe yinto encinci kakhulu kuba leyo isondele kumda we-Propiece activity timespan.
4.Ungayifaka njani i-Testosterone Propionate?
Inokuthi ijojowe nasiphi na isisu (ukuba isisundu sinkulu ngokwaneleyo). Iintlobo ezithandwa kakhulu, iigxa okanye i-triceps.
I-Testosterone propionate isetyenziselwa iisombululo ze-0.5-1 mL ye-1% okanye i-5% isisombululo sesilwanyana imihla ngemihla, iintsuku ze-1-2 kwiiveki ze-2 ukuya kwi-1-2 inyanga. Unyango lwe-testosterone propionate lubanjwe phantsi kweliso lugqirha.
Xa u-eunuchoidism, ukuzalwa kwangaphantsi kokuzalwa kwengcinezelo yezesondo okanye ukutshatyalaliswa kokugqithwa kwe testosterone propionate dosage yi-0.025 g okanye i-0.050 g ngalunye usuku. Ngokuphucula imeko, amanani ayatshintshela ku-0,005-0,010 ngosuku okanye yonke imihla.
Ukungabi namandla ngenxa yokusilela komsebenzi we-gonadal, ukuphazamiseka kwesifo kunye nengqondo kunye nokukhathala, ukunyuka kwesilisa kunye neentsholongwane kunye neentsholongwane ze-neuroloji i-dose yi-0.010 g imihla ngemihla okanye i-0,025 g 1-2 imihla.Kwinqanaba lokuqala leprotate testosterone propionate 10ml isetyenziswe yonke ngolunye usuku kwiinyanga ze-1-2. Kwizigaba zokuqala zengcinezelo yegazi kunye ne-angina, i-dose yi-0.010 ye-1-2 ngamaxesha ngeveki. Inkqubo yokonyango i-15-20 injections.Ukuba udosa i-dose yi-0,025 grams ngosuku (i-20-30 injections epheleleyo).
Kwiintsholongwane ze-vascular and neurological of the stomteric nature le dose yi-0.010 g yonke imihla, inkqubo yokonyango iinyanga ze-1-1.5.Komdlavuza we-ovari kunye nomhlaza wesifuba (phantsi kwe-60 iminyaka) kunye ne-radiotherapy, i-testosterone propionate inikwe i-0,050 imihla ngemihla kwiinyanga ze-3-3.5 kwaye i-dose yanciphisa i-0,20-0 30 g ngeveki ngenyanga, emva kweenyanga ezimbini i-dose yi-0.15 g ngeveki, kunye nezinye iinyanga ze-2 - i-0.10 g, ngoko ke isondlo umthamo we-testosterone propionate u-half half life.
Kwi-hepatitis engapheliyo kunye ne-cirrhosis yesibindi kunesimo esibi kunye neempawu zengxowankulu yecala lokunyuka kwegazi kunye ne-ascites enye yezicwangciso zejoyi ye-intramuscular testosterone propionate kwisibindi yilezi: iintsuku zokuqala ze-2 - 1 ml, emva kweentsuku ze-3 - 2 ml, iintsuku ze-4 - I-3 ml ye-1% isisombululo seoli kwiyeza; kwiintsuku ezilandelayo ze-7 - 1 ml ye-5% isisombululo seoli, ii-4 iintsuku - 2 ml kunye neentsuku ze-2-1 ml ye-1% isisombululo.
Umlinganiselo ophezulu we testosterone propionate intramuscularly: i-0.05 g (1 ml ye-5% isisombululo), imihla ngemihla - 0.10 g (2 ml ye-5% isisombululo).
5.Iziphumo ze-Testosterone Propionate powder (ezifunwa)
Kukho iziphumo ezibalulekileyo zeTestosterone:
Ukuphucula ukusebenza komzimba / ukuphucula (ukunyamezela, amandla, ukuvuselelwa ngokukhawuleza)
Ukuphuculwa komzimba (i-muscle buildup, ukulahleka kwamafutha)
Zonke iimpembelelo ezinqwenelekayo ze testosterone ezingabonwa ngumntu ngexesha lomjikelezo we-steroid, zibandakanya:
ukwanda kwe-collagen synthesis kunye ne-bone mineral content. I-Collagen yindlela yokwakha esekelwe kwiprotheni yamathambo afanelekileyo kuwo wonke umzimba (iigaments, i-tendon, i-cartilage, i-joints, namathambo).
ilizwi elijulile (lamadoda)
ubumnyama kunye nobunzima beenwele zomzimba
ukwandiswa kumanqanaba e-IGF-1 kunye ne-MGF hormones (ekhuthaza ukukhula komzimba)
ukwanda kwe-hemoglobin (isibalo sebomvu segazi)
Impembelelo echasene ne-catabolic kwiimfucu ze-muscle ngokusebenza njenge-anti-glucocorticoid.
6.Iziphumo zeTestrosterone Propionate powder (kunye nendlela yokujongana nayo)
Ingqekembe inamacandelo amabini, Njengawo wonke ama-anabolic steroids, kukho nezinye iziphumo ezibangelwa yiTestosterone Propionate, akukho mfuneko yokuxhalaba malunga nayo, kuyinto evamile.Ayazi kakuhle kwaye ufunde indlela yokujongana nayo.
Imiphumo ye-Estrogenic yeTesttosterone:
Iziphumo eziphambili ze-Testosterone Propionate zizungeze ikhono layo lokukhangela i-Estrogen. I-Testosterone inesimo esilinganiselweyo somsebenzi we-Estrogenic - inomlinganiselo wokulinganisela ukubophelela kwi-enzyme ye-aromatase (i-enzyme ejongene nokuguqulwa kweTestosterone kwi-Estrogen). Ngenxa yoko, inqanaba elincinci lokunambitheka kwezilwanyana kulindeleke ukuba lisetyenziswe kwi-Testosterone. Ukujongana nale ngxaki kukho izicombululo ezimbini:
I-1.Selective Modorators I-Estrogen (i-SERMs) njenge-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) okanye i-Clomifene (amagama e-brand: Androxal, Clomid kunye no-Omifin) ngokuzibophelela kwi-estrogen receptors - ukuzalisa nokukhusela i-estrogen yangempela ekubophelelweni.
I-2.Aromatase Inhibitors (AI) njengomsebenzi we-Anastrozole (Arimidex) ngokuvimbela inkqubo ye-aromatase kwaye iyanciphise amanqanaba e-estrogen yomzimba. I-Aromatise Inhibitors iphumelele kakhulu kuneSERMs.
Le mpembelelo yecala ivela kumanqanaba okwandiswa kwe-estrogen kwaye ibalwa yi-aromatase inhibitors (umzekelo u-Anastrozole-Arimidex).
Esi sisiphumo sokugcina amanzi. Iyabalwa yi-aromatase inhibitors.
I-Gynecomastia yintuthuko engaqhelekanga yamathambo esifuba kumadoda. Ukwandiswa kwezicubu zebele kunxulumene namazinga e-estrogen enyukayo. Oku kubalwa yi-Selective Estrogen Receptor Modulators okanye i-Aromatase Inhibitors.
Imiphumo yeAndrogenic yeTestosterone:
I-Testosterone ne-siderosteric side effects zihambelana nokuba i-Testosterone iguqulwa ibe yi-androgen i-dirodrotestosterone enamandla kunye ne-orrogen (DHT) ene-5-alpha reductase (5AR) enzyme.
I-5-alpha yokunciphisa i-enzyme ikhoyo ngokubanzi kwiishuphu ezithile, ezifana ne-scalp, i-prostate kunye nesikhumba. Xa i-Testosterone ifinyelela ezi zicuksi, iyancipha izinga eliphezulu lokunciphisa kwi-DHT enamandla kunye ne-androgenic metabolite. Ngu-DHT ojongene nobunzima obukhulu beemiphumela zecala ze-androgenic.
Esi siphumo sempembelo sithembele ngokupheleleyo kwi-genetic predisposition. Ukuba akukho namabhinqa kwintsapho yakho, oku akuyi kuba ngumcimbi kuwe. Ukuba i-patdness yamadoda ehamba kwiijethi zakho uya kulahlekelwa yizinwele zakho, kodwa u-testosterone supplementation unokukhawulezisa inkqubo. Oku kungabalwa kwinqanaba elithile neFfinasteride kunye nokusetyenziswa kwe-2% yeNzoral (Ketoconazole) shampoo.
Ikhumba elinamafutha lenza ukuba izinwele zikhanye. Kwezinye izilwanyana, abesilisa abaneenwele ezicwebileyo banomdla obunqwenelekayo / okunempilo.
Ikhumba elinamafutha kwandisa amathuba okwenza i-pore igubungele kunye nokwakhiwa kwe-Acne. Ngokwezinga elithile le nto ingabalwa ngokusetyenziswa kwe-Nizoral 2% shampoo, apho isithako sayo esisebenzayo iKetoconazole sisebenza njenge-blocker ye-DHT ekwesikhumba nasesikhwameni, ngokunciphisa ngokuthe ngcipheko amathuba okubangela ukuba i-androgens ibangele i-pattern baldness kunye ne-acne breakouts eyabangela ukwanda isikhumba esinamafutha. I-acne idla ngokucinywa ngokukhawulelwa kwe-steroids kungekudala emva kokuyeka ukujikeleza kwe-testosterone.
Izifundo zibonise imibutho ecacileyo phakathi kwe-testosterone kunye nobudlova. Ukuqhayisa uhlobo oluthile lokulawula umgudu-ukunyamekela ukugqithisa kwisiganeko esingaqhelekanga.
Xa i-testosterone yangaphandle isongezelelwa ukuveliswa kwetrostoneone yethu yemvelo iyancipha. Amathambo ayeka ukuvelisa i-testosterone kuba kukho ubuninzi bezinto ezivela ngaphandle. Ngenxa yoko bahlehla okwethutyana. Ngexesha lomjikelezo we testosterone akukho nto esinokuyenza malunga ne-atrophic testicular. Xa ukusetyenziswa kwe testosterone yangaphandle kuphelile ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo kuya kubuyiselwa kancane kwaye ama-testicles abuyele ebukhulu bawo. Abasebenzisi be-Steroid bakhawuleza ukuphulukana ngokuthatha i-Clomiphene citrate (amagama e-brand: Androxal, Clomid kunye ne-Omifin). I-HCG (i-Griadotropin yoluntu ye-chorionic) isetyenziselwa ukubuyisela ngokukhawuleza ukuvelisa i-testosterone yemvelo.
Nangona ukuxhaswa neTestosterone, amadoda ahlala eqaphela i-libido ephakamileyo (i-sex drive). Ngokufanayo baqaphela ukuhla kwe-libido ngexesha lokuxhaswa kwe-testosterone liphelile kwaye phambi kokuba umveliso we-testosterone wabuyiselwe kwakhona (kunye ne-clomiphene citrate okanye i-HCG).
7.Isiqhelo se Testosterone Propionate powder
Amaxabiso ahlukahluka ngokubhekiselele kumgangatho kunye nomkhwa. Iimveliso ze-pharma ezinkulu, ezimiselweyo oogqirha zinzima ukuza kwaye ngokucacileyo zibiza kakhulu-ukunyuka kwephindwe kabini ngokuthelekiswa ne-Propionate yomhlaba.
Kwimarike emnyama (amaninzi kumayeza e-intanethi) Amanani okuPhucula amaxabiso u kusuka kwi $ 45 ukuya kwi-$ 90 nge-10ml (100mg nge ml). Ukwahlula kwamaxabiso kudla ngenxa yobungakanani nokucoca kwezinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenziswayo, amandla kunye nokufumaneka kwiimarike zendawo.
Ukuba u khangela testosterone propionate ukuthengiswa, unokuyilungisa le nyango ngoku, kwaye wenze umyalelo wokuhambisa. Ukuthenga i-testosterone propionate kwi-inthanethi, akudingeki ukuba wenze ijojo. Udinga kuphela Ukungena kwiwebhusayithi yethu Ukuyalela Ukuthumela i-imeyile, uya kufumana impendulo kwimizuzu ye-30, iimveliso ezithile zonxibelelwano kunye nemigaqo yokuhlawula, ufuna ukulungiselela ukulungiselela kwakho.
Ekugqibeleni, lindele ukuba iphakheji lifike emnyango!
Kuphi ukuthenga i-Testosterone Ukuphucula i-powder eluhlaza kwi-intanethi?
Indlela yokukhetha umthengi onokwethenjelwa we-sildenafil citrate powder	Thenga i-Testosterone Inanthate powder in Bulk